Wasaaradaha internetka - Kaniisadaha Masiixa ... Waa kuwee dadkan?
Kaniisadaha Masiixa ... Waa kuwee dadkan?
Waxa laga yaabaa inaad maqashay kiniisadaha Masiixa. Waxaa laga yaabaa in aad weydiisatey, "Waa kuwee dadkan? Maxay - haddii wax - ay ka kala soocaan boqolaal kaniisado kale oo adduunka ah?
Waxaa dhici karta inaad la yaabtay:
"Waa maxay taariikhdooda taariikheed?"
"Meeqa xubnood baa leh?"
"Waa maxay farriintooda?"
"Sidee loo xukumaa?"
Sidee bay u caabudaan?
"Maxay rumaysan yihiin Kitaabka Qudduuska ah?
Immisa xubnood baa jira?
Dunida waxaa jira ururo 20,000 ah oo kaniisadaha Masiixa ah oo leh wadar ahaan 21 / 2 ilaa 3 million shakhsiyadeed. Waxaa jira jaaliyado yaryar, oo ka kooban xubno yar - iyo kuwa waaweyn oo ka kooban dhowr kun oo xubnood.
Xoogga ugu weyn ee awoodda tirooyinka kaniisadaha Masiixa waxay ku sugan yihiin koonfurta maraykanka halkaas, tusaale ahaan, waxaa jira xubno ka tirsan 40,000 ururada 135 ee Nashville, Tennessee. Ama, Dallas, Texas, halkaas oo ay jiraan qiyaastii xubnaha 36,000 ee jamciyada 69. Xaaladahaas oo kale sida Tennessee, Teksas, Oklahoma, Alabama, Kentucky - iyo kuwo kale - waxaa jira kiniisad Masiixa ah oo ku taalla magaalo kasta, iyada oo aan loo eegin sida ay u weyn tahay ama yar tahay.
In kastoo tirada jamciyada iyo xubnuhu aysan ahayn meelo badan oo meelo kale ah, waxaa jira kaniisadaha Masiixa ee gobol kasta oo ku yaalla Mareykanka iyo 109 dalal kale.
Dadka Ruuxa Quduuska ah
Xubno ka mida kaniisadaha Masiixa waa dad ku nool ruuxa dib u soo celinta - oo doonaya in uu soo celiyo waqtigeena kiniisadda asalka ah ee Axdiga Cusub.
Dr. Hans Kung, oo ah aqoonyahan caan ah oo caan ah, ayaa daabacay buug yar dhawr sano ka hor isagoo xaq u leh Kaniisadda. Dr. Kung ayaa ku nuuxnuuxsaday xaqiiqda ah in kaniisada la aasaasay ay lumisay jidka; ayaa caqabad ku noqotay dhaqan ahaan; ayaa ku fashilmay inay ahaato waxa uu Masiixa u qorsheeyay inay tahay.
Jawaabta kaliya, sida laga soo xigtay Dr. Kung, waa inuu dib ugu noqdo Qorniinka si uu u arko waxa kaniisaddu ahayd bilowgii hore, ka dibna wuxuu ku soo kabanayaa qarnigii labaatanaad ee aasaaskii kaniisaddii asalka ahayd. Tani waa kan kaniisadaha Masiixa doonayaan inay sameeyaan.
Qeybta danbe ee qarnigii X-Xumaad, raggii kala duwanaa ee kala duwanaa, waxbartey oo isbarbar dhigayay midba midka kale, qaybo kala duwan oo adduunka ah, waxay bilaabeen inay weydiiyaan:
-Haddii aan dib ugu soo laabanaynin mabaadii'da mabaadi'da si fudud iyo nadiifnimada kaniisad qarnigii koobaad?
- Maxaad u qaadataa Kitaabka Quduuska ah keligiis oo mar kale sii wadaan "si joogta ah rasuulka rasuullada" ... (Falimaha 2: 42)?
-Haddii aan abuurin isku mid ah (ereyga Ilaah, Luukos 8: 11), in masiixiyiinta asaasiga ah ee beeray, oo Masiixiyiin oo keliya, sida ay ahaayeen?
Waxay dadka oo dhan ka codsadeen in ay iska tuuraan diinta islaamka, si ay u tuuraan bini aadamka, iyo inay raacaan Kitaabka Quduuska ah kaliya.
Waxay barteen inaan waxba laga rabin dadka sida ficilada rumaysadka marka laga reebo wixii ka muuqda Qorniinka.
Waxay carrabka ku adkeeyeen in dib-u-noqoshada Kitaabka Quduuska ah macnaheedu maaha in la aasaaso hannaan kale, laakiin halkii ay ku noqon lahayd kaniisaddii asalka ahayd.
Xubnaha kaniisadaha Masiixa way ku qanacsan yihiin habkan. Iyadoo Kitaabka Qudduuska ah sida hagaha kaliya ee aan dooneyno inaanu helno waxa kaniisad asalkiisu ay u egtahay oo ay u soo celiso si sax ah.
Kama aragno tan sida kibirsan, laakiin ka soo horjeeda. Waxaan badbaadineynaa inaanan xaq u leenahay in aan codsanno raga ujeedada aadanaha-laakiin kaliya xaq uma laha in raga loogu yeedho qorshaha Ilaah.
Sababtan awgeed, ma nihin danaha dadka, laakiin si fudud oo ah Axdiga Cusub. Uma maleynayno nafteena inagoo ah aamusnaan - maaha sida Catholic, Protestant, ama Yuhuudda - laakiin sida xubno ka mid ah kaniisada Ciise uu sameeyay oo uu ku dhintay.
Taasna, dhacdadan, waa sababta aan u xirtey magaciisa. Ereyga "kaniisadda Masiixa" looma adeegsan karo magac loogu yeedho, laakiin waa erey cad oo tilmaamaya in kaniisaddu ay tahay Masiixa.
Waxaan aqoonsanahay dhibaatooyinkeena shakhsi ahaaneed iyo daciifnimada - taasina waa sababta oo ah sababo badan oo doonaya in ay si taxadar leh u raacaan qorshaha ku filan oo dhan iyo kan ugu fiican ee Ilaah u leeyahay kaniisadda.
Midnimadu waxay ku xirantahay Kitaabka Quduuska ah
Maxaa yeelay, Ilaah wuxuu leeyahay awood "dhammaan awoodda" Masiixa (Matayos 28: 18), iyo tan iyo markii uu u adeego ereyga Ilaah maanta (Cibraaniyada 1: 1,2), waa xukunkayaga oo keliya Masiixu awood u leeyahay inuu sheego waxa kaniisaddu tahay iyo waxa waa inaan barnaa.
Tan iyo Axdiga Cusub ee keliya ayaa tilmaamaya tilmaamaha Masiixa ee xertiisa, waxa kaliya oo ay tahay inuu u adeego asaas u ah barashada diinta iyo dhaqanka oo dhan. Tani waxay aasaasi u tahay xubno ka tirsan kaniisadaha Masiixa. Waxaan rumaysannahay in barista Axdiga Cusub aan wax laga bedelin habka kaliya ee lagu hoggaamiyo ragga iyo dumarka inay noqdaan Masiixiyiin.
Waxaan aaminsanahay in diintu ay tahay mid xun. Ciise wuxuu baryayaa midnimada (John 17). Dabadeedna, rasuulladii Bawlos waxa ay ka baryeen kuwa loo qaybiyay inay ku midoobaan Masiixa (1 Corinthians 1).
Waxaan aaminsanahay in habka keliya ee lagu gaaro midnimada inay tahay soo noqoshada Kitaabka Qudduuska ah. Dib-u-dhiska ma keeni karo midnimo. Xaqiiqdii ma jiro qof ama koox dad ah, waxay xaq u leeyihiin inay soo saaraan xeerar gaar ah oo ay tahay in qof waliba ku sii jiri doono. Laakiin dhammaantiis waa mid ku habboon in la yiraahdo, "Aan ku midoobno ​​adoo raacaya Kitaabka Qudduuska ah." Tani waa cadaalad. Tani waa amaan. Tani waa sax.
Haddaba kiniisadaha Masiixa waxay ku andacoonayaan midnimo diimeed oo ku salaysan Kitaabka Qudduuska ah. Waxaannu rumaysan nahay in aan u qorno wax kasta oo caqli ah oo aan ahayn Axdiga Cusub, inaan diidin in la addeeco amarrada Axdiga Cusub, ama in la raaco wax kasta oo aan ku adkayn Axdiga Cusub waa inuu ku daro ama ka qaato waxbarista Ilaah. Labada darajo iyo isugeyn labadaba waxaa lagu cambaareeyay Kitaabka Quduuska ah (Galatiya 1: 6-9; Muujintii 22: 18,19).
Tani waa sababta Axdiga Cusub ee uu yahay xukunka kaliya ee iimaanka iyo dhaqanka aan ku leenahay kaniisadaha Masiixa.
Kulan kasta oo Is-Xukun ah
Kaniisadaha Masiixa ma laha mid ka mid ah xayiraadda xafiisyada xafiisyada casriga ah ee casriga ah. Ma jiro golayaal dawladeed - ma ahan degmada, gobol, wadan qaran ama caalami ah - lahayn xarun caalamiya oo aan lahayn hay'ad aadanaha naqshadayn.
Kulan kasta waa mid madaxbannaan (is-xukun) oo ka madax bannaan urur kasta oo kale. Kaliyaha kaliya ee isku xira jamciyada badani waa isku kalsoonaanta Masiixa iyo Kitaabka Qudduuska ah.
Ma jiraan heshiisyo, shirar sanadle ah, ama daabacaad rasmi ah. Wadashaqayntu waxay ka wada shaqeeyaan sidii loo taageeri lahaa guryaha carruurta, guryaha waayeelka, hawlaha shaqada, iwm. Hase yeeshee, ka qaybqaadashadu si ikhtiyaari ah ayey uga mid tahay qayb kasta oo ka mid ah urur kasta oo aan lahayn shakhsi ama koox siyaasadeed ama go'aan ka gaadho jameeco kale.
Urur kasta waxaa maamula degaanno kala duwan oo ka mid ah odayaasha oo laga soo xulay xubnaha. Kuwani waa ragga buuxiya shuruudaha gaarka ah ee xafiiskan lagu bixiyo 1 Timothy 3 iyo Titus 1.
Waxaa sidoo kale jira kiniisado ka mid ah urur kasta. Kuwani waa inay buuxiyaan shuruudaha kitaabiga ah ee 1 Timothy 3. Aniga
Cibaadada kiniisadaha Masiixa ee xarumaha shanta ah, sida kaniisaddii qarnigii koobaad. Waxaan aaminsanahay in qaabkani yahay muhiim. Ciise wuxuu yidhi, "Ilaah waa ruux, kuwa caabudayna waa inay ku caabudaan ruuxa iyo runta" (Yooxanaa 4: 24). Qoraalkan waxaan ka baraneynaa saddex waxyaalood:
1) Cibaadada waa in lagu tilmaamaa shayga saxda ah ... Ilaah;
2) Waa in la keenaa ruuxa saxda ah;
3) Waa inay ahaato mid run ah.
Si aad Ilaah u caabuddo sida runta ah waa in lagu caabudo sida uu eraygiisa, maxaa yeelay eraykiisu waa runta (John 17: 17). Sidaa darteed, waa in aynaan ka saarin shey kasta oo laga helay eraygiisa, waana in aynaan ku darin shey aan laga helin Ereygiisa.
Arrimaha diinta waxaan ku soconnaa rumaysad (2 Corinthians 5: 7). Sababtoo ah rumaysadku wuxuu ku yimaadaa adigoo maqlaya ereyga Ilaah (Rooma 10: 17), wax kasta oo aan ogolaanin Kitaabka Qudduuska ah ma rumaysan karo rumaysadka ... wax kastoo aan rumaysadka ahayn waa dembi (Romans 14: 23).
Shanta saldhig ee cibaadada ee lagu arkay kaniisaddii kowaad ee qarniga ahayd waxay heesayeen, tukanayeen, wacdiyaan, bixiyaan, iyo cunista Cashada Rabbiga.
Haddii aad taqaano kaniisadaha Masiixa, waxaad ogtahay in laba ka mid ah shayadani ay ka duwan yihiin kooxaha diinta. Sidaa darteed aniga ii ogolow inaan diirada saaro labadan, iyo sheeg sababta aan u sameyno.
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu badan ee dadka ku ogaanaya ku saabsan kaniisadaha Masiixa waa inaan ku heeso iyada oo aan la isticmaalin qalabka farsamada muusikada - heesaha cappella waa muusiga kaliya ee loo adeegsado cibaadadayada.
Si fudud loo sheego, halkan waa sabab: Waxaan dooneynaa inaan ku cibaadeysto sida ku cad tilmaamaha Axdiga Cusub. Axdiga Cusub wuxuu ka baxayaa muusikada qalabka, sidaas darteed, waxaan aaminsanahay in ay sax tahay oo ay nabadgelyo tahay in laga baxo. Haddii aan isticmaalno qalabka farsamada waxaan samayn lahayn sidaas oo aan laheyn awoodda New Testament.
Waxaa jira aayado 8 oo Axdiga Cusub ku saabsan mawduuca muusiga ee cibaadada. Halkan waxaa ah:
Oo markay gabaygii farxeen ayay ka soo kexeeyeen Buur Saytuun. (Matayos 26: 30).
"Habeenkii badhkeed Bawlos iyo Silas ayaa tukanayay oo gabay gabayaaga Ilaah ..." (Falimaha 16: 25).
"Sidaas daraaddeed waxaan kugu ammaani doonaa quruumaha dhexdooda, oo magacaaga ammaan baan ugu gabyi doonaa" (Rooma 15: 9).
"Waxaan u heesi doonaa ruuxa, waxaan ku heesi doonaa maskaxda" (1 Corinthians 14: 15).
"Ruuxu ka buuxsamo, oo midkiinba midka kale jacaylka iyo gabayada iyo gabayada ruuxiga ahba, oo gabaygiisa oo dhanna gabay ku gabyi doono" (Efesos 5: 18,19).
"Ereyga Masiixa si hodan ah ha ku dhex noolaado, sida aad wax u baratid oo kale u xoojisid xigmadda oo dhan, iyo sida aad ugu heeseyso gabayada iyo gabayada iyo gabayada ruuxiga ah ee aad uga mahad celinaysaan qalbiyadaada Ilaah" (Colossians 3: 16).
Magacaaga waxaan u sheegi doonaa walaalahay, Oo ururka dhexdiisa ayaan kugu ammaani doonaa. (Hebrews 2: 12).
Ma jiro mid idinka mid ah oo kaa xanaajiya, Oo isagu ma wax buu baryaaye? Miyuu midkoodba kan xaqa ah ku yidhaahdaa, Isagu waa gabay, Ammaanu ha u ahaato.
Qalabka farsamada ee muusikada ayaa si cad uga maqan marxaladan.
Taariikh ahaan, muuqaalka kowaad ee muusikada qalabka ah ee cibaadada kaniisadda maaha ilaa illaa qarnigii lixaad ee AD, mana jirin wax la qabadsiin ilaa qarnigii siddeedaad.
Muusigga muusigga ayaa si adag uga soo horjeeday hoggaamiye diineed sida John Calvin, John Wesley iyo Charles Spurgeon sababta oo ah maqnaanshaha Axdiga Cusub.
Booqashada Toddobaadle ah ee Cashada Rabbiga
Meel kale oo aad ku aragtay farqi u dhexeeya kaniisadaha Masiixa iyo kooxaha diimeed ee kale waxay ku jiraan Cashada Rabbiga. Munaasabadan xusuusta ah ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay Ciise habeenkii khudbadiisa (Matthew 26: 26-28). Waxa lagu arkay Masiixiyiin xusuusiyay dhimashada Rabbiga (1 Corinthians 11: 24,25). Calaamadaha - kibis aan khamiir lahayn iyo miraha geedka canabka ah - waxay calaamad u yihiin jidhka iyo dhiigga Ciise (1 Corinthians 10: 16).
Kaniisadaha Masiixa way ka duwan yihiin kuwa badan oo ah in aynu ilaalino Cashada Rabbiga maalinta ugu horreysa ee usbuuc kasta. Mar labaad, sababtayada xarumaheenna ah ee go'aankeena raacaya barashada Axdiga Cusub. Waxay sheegaysaa, sharraxaadda dhaqanka kaniisaddii 1-aad, "Maalintii ugu horraysay ee toddobaadka ... xertu waxay isugu yimaadeen inay jebiyaan rootiga ..." (Falimaha 20: 7).
Qaarkood waxay diideen in qoraalka uusan sheegin maalinta ugu horeysa ee asbuuc kasta. Tani waa run - sida amarka ah in la ilaaliyo Sabtida ma uusan sheegin Sabti kasta. Amarku wuxuu ahaa mid fudud, "xusuusnow maalinta Sabtida si uu u xajiyo quduuska" (Exodus 20: 8). Yuhuuddu waxay fahmeen in ay macnaheedu tahay in Sabtida kasta. Waxay u muuqataa in ay tahay sabab la mid ah "maalinta koowaad ee usbuuca" macnaheedu waa maalinta koowaad ee usbuuc kasta.
Mar labaad, waxaan ka og nahay taariikhyahanada la ixtiraamo sida Neander iyo Eusebius in Masiixiyiin ee qarniyadii hore ay qaateen Cashada Rabbiga ee maalin kasta.
Waxaa laga yaabaa in aad la yaaban tahay, "Sidee qofku u noqonayaa xubin ka mid ah kaniisadda Masiixa?" Waa maxay shuruudaha xubinnimada?
Kaniisadaha Masiixa kama hadlaan xubinimada shuruudaha qaarkood oo loo baahan yahay in la raaco oggolaanshaha aqbalaadda ee kaniisadda. Axdiga Cusub wuxuu bixinayaa tallaabooyin ay dadku qaateen maalintaas si ay u noqdaan Masiixiyiin. Marka qofku noqdo Masiixi si toos ah wuxuu ahaa xubin ka mid kaniisadda.
Isla sidaas oo kale waa kaniisadaha Masiixa maanta. Ma jiro nidaam gooni ah oo shuruuc ama xaflado ah oo mid waliba waa inuu raaco kaniisadda. Marka qofku noqdo Masiixi, isla markaa, wuxuu noqonayaa xubin ka mid kaniisadda. Ma jiro talaabooyin dheeri ah oo looga baahan yahay xubinnimada kaniisadda.
Maalintii kowaad ee jiritaanka kaniisadihii kuwa toobad keena oo la baabtiisay ayaa la badbaadiyay (Falimaha 2: 38). Oo maalintaasna dadkii badnaa oo dhan waa la wada farxiyey, oo waxaa loo sii dhiibay kaniisadda, (Falimaha Rasuullada dhexdiisa: 2). Sida ku xusan aayaddan (Falimaha 47: 2) waxa uu ahaa Ilaah kii ku daray. Sidaa daraadeed, adoo doonaya in aan raacno qaabkani, waxaanan u codeyneynaa dadka kaniisadda mana ku qasbi karno daraasado loo baahan yahay. Waxanu xaq u leenahay inaan ka dalbanno wixii ka dambeeya addeecitaankooda addeecsan ee badbaadiyaha ah.
Xaaladaha cafiska ee lagu baray Axdiga Cusub dhexdiisa waa:
1) Waa inuu maqlo injiilka, waayo, "rumaysadku waa soo baxayaa isagoo maqlaya ereyga Ilaah" (Romans 10: 17).
2) Mid waa in uu rumaysto, waayo, "rumaysad la'aanteed ma suurtowdo inaan Ilaah ka farxiyo" (Hebrews 11: 6).
Mid waa inuu toobad keenaa dembiyadii hore, waayo Ilaah wuxuu ku amrayaa ragga oo dhan, meel kasta oo ay ka toobad keenaan "(Falimaha 3: 17).
Mid waa inuu Ciise u qirto sida Rabbi, waayo, wuxuu yidhi, Kii qaynuunnadayda ku xukuma, anna waan ku qiran doonaa Aabbahayga jannada ku jira hortiisa. (Matthew 4: 10).
Mid waa in la baabtiisaa cafiska dembiyada, waayo, Butros wuxuu ku yiri, "Toobad keena, oo midkiinba midka kale ha ku baabtiiso magaca Ciise Masiix dembigaaga dembiyadiinna ..." (Falimaha Rasuullada: 5) .
Xooga saarista Baabtiisnimada
Kaniisadaha Masiixa waxay leeyihiin sumcad si ay u keenaan culeysyo badan oo ku saabsan baahida loo qabo baabtiiska. Si kastaba ha ahaatee, kama fekereyno baabtiiska sida "kaniisadda kaniisadda," laakiin amar ahaan Masiixa. Axdiga Cusubi waxa uu barayaa sida baabtiiska oo ah muhiim u ah badbaadada (Markos 16: 16; Falimaha 2: 38).
Ma ma tababarno baabtiiska ilmaha yar sababtoo ah baabtiiska Axdiga Cusub waa uun dembiilayaasha oo u soo jeestay xagga Rabbigaa rumaysadka iyo xukunka. Ilmuhu ma laha dembi inuu ku toobad keeno, mana noqon karo qof rumayste ah.
Nidaamka keliya ee baabtiiska ah ee aan ku dhaqanno kaniisadaha Masiixa waa diinta. Ereyga Giriigga ah ee erayga baabtiisku ka yimaadaa macnihiisu waxa weeyi "in la gooyo, in la gooyo, in la gooyo, in la gooyo." Kitaabka Qudduuska ahu wuxuu markasta ku tilmaamayaa baabtiis sidii aas aaska (Falimaha 8: 35-39; Romans 6: 3,4; Colossians 2: 12).
Baabtiisku waa mid aad muhiim u ah sababtoo ah Axdiga Cusubi waxa uu tilmaamayaa ujeedooyinka soo socda:
1) Waa inay galaan boqortooyada (John 3: 5).
2) Waa inay la xiriiraan dhiigga Masiixa (Romans 6: 3,4).
3) Waa inuu galo Masiixa (Galatiya 3: 27).
4) Waxaa loogu talagalay badbaadada (Mark 16: 16; 1 Peter 3: 21).
5) Waa dembidhaafka (Falimaha 2: 38).
6) Waa in la mayro dembiyada (Falimaha 22: 16).
7) Waa inaad gasho kaniisadda (1 Corinthians 12: 13; Efesos 1: 23).
Tan iyo markii Masiixa uu u dhintay dembiyadii dunida oo dhan iyo martiqaad uu ku faani lahaa nimcadiisa badbaadintiisa wuxuu u furan yahay qof walba (Muujintii 10: 34,35), ma rumaysanno in qofna loo yaqanno badbaadada ama ciqaabta. Qaarkood waxay dooran doonaan inay Masiixa u yimaadaan rumaysad iyo addeecid oo ay badbaadaan. Qaar kale way diidi doonaan codsigooda waana la ciqaabi doonaa (Mark 22: 17). Kuwani looma lumi doono, sababtoo ah waxaa loo calaamadiyay ciqaab, laakiin waa sababta ay u doorteen.
Meel walba oo aad joogtid xilligan, waxaan rajeyneynaa inaad go'aansato inaad aqbasho badbaadada uu Masiixa bixiyo - inaad adigu rumaysato inaad adigu rumaysato oo aad xubin ka noqoto kaniisaddiisa.